“Iskuma haleyn karno nafteena, sababtoo ah Lyon waxay awoodaa inaan naga adkaato” – Valverde oo ka digay kulanka Lyon – Gool FM
“Iskuma haleyn karno nafteena, sababtoo ah Lyon waxay awoodaa inaan naga adkaato” – Valverde oo ka digay kulanka Lyon
(Europe) 17 Dis 2018. Macalinka kooxda Barcelona Ernesto Valverde ayaa iska diiday fikrada ah in Blaugrana ay hadaba xaqiijisay inay u gudubtay wareega xiga ee siddeed dhamaadka tartanka Champions League, kadib markii ay kaga begantay kooxda Lyon, isku aadka wareega 16-ka ee maanta la sameeyay.
Ernesto Valverde ayaa kadib markii uu ogaaday kooxda ay Barcelona kula ciyaari doonto wareega 16-ka Champions League wuxuu bixiyay wareysi arintan ku aadan.
“Lyon waa kooxda Manchester City kula soo dagaalantay hogaaminta Group F ilaa iyo kulanka ugu dambeeyay, waxaan u maleynayaa inay haystaan weerar xoogan”.
“Waxay si fiican uga bilaawdeen tartanka Champions League xili ciyaareedkan, kadib markii ay kaga guuleysteen Manchester City garoonkooda, waana faahfaahin muujineysa awooda ay u leeyihin inay ka guuleysan karaan koox kasta”.
“Ma joogno xili aan nafteena ku kalsoonaan karno, waxaan heysanaa laba bilood si aan u helno awood dheeri ah, isla markaana aan wax badan ka ogaano kooxda naga soo hor jeeda iyo inaan si fiican u ciyaarno, waxay u weerar tamayaan si fiican, isla markaana waa kuwo xawaare xoogan leh”.
Thomas Tuchel oo amaanay Manchester United kahor kulanka ay ku wada ciyaari doonaan Champions League
Wiil SOOMAALIYEED oo Caalamka uga Yaabsaday SAADAALIN uu sameeyay....(BAL DAAWO)